China ụlọ ọrụ 1.6m gbajiri agbapụta mepụtara ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na - eweta ya | Hongli
* Ike imeputa site na 1500kg, ikike imeputa ya kpọmkwem dabere na igwe eji eme ihe ma gbazee nha ebu.
2. rodudị mmịpụta: Vetikal Blow Down Down
5.Igbo Mpempe: 1600MM
Ikike ikike mmeputa: 1500KG / 24Hours
7.Designed Max. Ọsọ: 15M / Nkeji
8.Total ike: 600KW
1.90 Nleghari Single Nkpuru: 1set
6.Net chaja na ụdị hydraulic Double Pillow Non-Stop Type
Ngwaọrụ 7.Electrostatic Electret
8.Servo na-emegharị ahụ na ngwaọrụ
9.Roots ikuku na mmiri Fan usoro
10.Automatic Slitting na ngwaọrụ Rewinding
11.Siemens PLC na-achịkwa usoro.
2.Free spare Parts: partsfọdụ akụkụ Worn dị ka onye na-ejikọ, efere ikpo, wdg.
Principlekpụrụ teknụzụ nke ịgbaze ịgba
Usoro gbajiri agbaji bụ nke iji ikuku ọkụ ọkụ dị elu iji dọpụta obere mmiri nke polymer gbazee site na oghere Spenneret nke isi nwụrụ anwụ, site na nke a na-etolite ma na-edobe eriri nke ultrafine na ihuenyo ntọala ma ọ bụ roller, wee bụrụzie ndị na-abụghị kpara site na ntinye onwe.
Udiri ihe eji agba agba n’igwe n’enwe ihe nile na –eme akwa, ihe mgbapụta, ihe gbawara, isi ihe gbazee, igwe oku, ihe ndi ozo, otu nweta net, nzacha, uzo electrostatic electret na otu Ntọala igwe eji aka ihe. N'ime akụkụ ndị a, ihe kachasị mkpa bụ isi gbazee ọnwụ.
Na polima na-agbaze usoro nkesa. Usoro a na - ahụ maka na gbazere polymer na - aga otu oge n'ogologo nke agbaze agbazere ahụ ma nwee oge njigide edo, iji wee hụ na agbaze agba ahụ na - abụghị ihe a na - ete ahụ nwere ihe ndị ọzọ edobere na obosara ya. Ka ọ dị ugbu a, ụdị mkpuchi mkpuchi polymer na-agbaze agbaze na-ejikarị usoro ịgbaze agbaze. N'ihi na ụdị T-ụdị nkesa na-enweghị ike ikesa mmiri mmiri. Thedị n'otu a na-agwakọta agbụ ma ọ bụ sọlfọ nwere njikọ chiri anya na isi ọnye gbazee. Na mkpokọta, usoro ịkpụzi ahụ na agbaze agbaze dị elu, yabụ na ọnwụ dị oke ọnụ iji rụpụta ya. Banyere igwe mkpuchi ikuku, eriri akwa na-agbaze agbaze chọrọ ikuku ikuku dị ọkụ. A na - enyefe ikuku mpịpụta ikuku site na ikuku ikuku na - agagharị na ikuku na - eme ka ọ dị ọkụ maka ikpochasị ikuku mgbe ọchara nhichachara, wee mịga agba agba ahụ na - agbaze. Igwe ọkụ ikuku bụ arịa nrụgide, ma n’otu oge iguzogide oxidation nke ikuku dị elu, yabụ ihe ahụ ga-abụrịrị igwe anaghị agba nchara.
* O juputara na akpukpo ahihia site na ihe udiri ihe rue n’etu agbazechara akpukpo ahihia, teknuzu tozuru oke, oso oso, PFE nwere ike iru 95 ma n’elu.
* Ike imeputa site na 1500kg, ikike nrụpụta ọrụ ahụ dabere na igwe nrụpụta ma gbazee nha ebu.
1. :Dị: HL-1600
2. Produdị Mmepụta: Vetical Blow Down Down
4. Ihe Etinyere: PP
5. Obosara Ngwaahịa: 1600MM
6. Ike Mmepụta: 1500KG / 24Hours
7. Ezubere Max. Ọsọ: 15M / Nkeji
8. Mkpokọta ike: 600KW
1. 90 Sing Screw Extrusion: 1set
3. Ngwaọrụ Igwe Ọkụ
4. Mpepe Mpepe
5. Spinneret 1860
6. Net chaja na Hydraulic Double Pillow Non-Stop Type
7. Ngwaọrụ Electrostatic
8. Servo ibanye na ngwaọrụ
9. Mgbọrọgwụ ikuku mmiri na mmiri Fan usoro
10. Mgbanye akpaaka na Mbugharị Ngwaọrụ
11. Usoro njikwa Siemens PLC.
1. Nkwado vidiyo nwụnye, na nkwukọrịta ndụ vidiyo na mmezi enwere obere nsogbu.
2. Akụkụ Egwuregwu Free: partsfọdụ akụkụ Worn dịka njikọ, efere ikpo, wdg.
3. Akwụkwọ ikike igwe: otu afọ